Maharitra hafiriana ny horonan-tsarimihetsika iray mankany amin'ny TikTok? - XperimentalHamid
Maharitra hafiriana ny horonan-tsarimihetsika iray mankany amin'ny TikTok?
Manjavozavo foana ny media sosialy. Tsy andro iray akory no lasa rehefa tsy maheno zavatra mahaliana na iray hafa isika.
Inona no mahatonga ireto fampiharana / tranonkala ireto hahafinaritra sy be mpitia? Tsotra ny valin'izany: ny vahoaka. Ny olona izay manana sehatra hizara ny atiny mahavariana an-tserasera. Mahatonga ity toerana iray manontolo ity ho mendrika.
Raha ny sasany amin'ireto olona ireto dia be mpitia ary azo raisina ho mpanentana. Ny ankamaroan'ny olona dia mbola manandrana mitady lalana mankany amin'io toe-javatra izay toa nankafizin'ilay voalohany.
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe inona no atao mba ho influencer amin'ny tranonkala media sosialy? Eny, mety ho sarotra ny valiny. Fa zavatra iray no azo antoka, raha te-ho fantatra ny mombamomba azy dia tsy maintsy mamoaka ny votoatin'ny virus isan'andro sy isan'andro izy.
Fotoana ilàna horonan-tsary mandeha amin'ny viralin'ny TikTok:
Ny fotoana ilaivan'ny horonantsary ho lasa viral ao amin'ny TikTok dia miovaova arakaraka ny kalitaon'ny atiny sy ny anton-javatra maro hafa. Efa elaela izay no nitadiavan'ny olona izany foana.
Toy izany koa, misy fanazavana be dia be koa. Angamba izay rehetra nozaraina momba ity fanontaniana ity dia manana fahamendrehana. Saingy misy fampahalalana marobe hafa tsy fantatsika.
Amin'ity lahatsoratra ity, noho izany, dia hizara antony vitsivitsy aho. Ireo lafin-javatra ireo dia afaka manampy anao hahafantatra hoe ohatrinona ny fotoana ilain'ny horonantsary iray amin'ny viraliny.
Manantena ireo olona mavitrika amin'ny tranokalan'ny tambajotra sosialy fa mety hahita ny iray amin'ireo horonantsarin'izy ireo lasa malaza be izy ireo indray andro any. Io no lojika mitarika ity lalao media sosialy ity.
Na dia betsaka aza ny olona mikendry ny ho tonga any, vitsy ihany no mahita ny horonantsarin-dry zareo mihetsika na lasa malaza be.
Ka inona no mahatonga ireo horonantsary ho lasa viral amin'ny TikTok? TikTok, tsy isalasalana, dia toerana izay ananan'ny tenany manokana izay antenain'ny olona avy amin'ny tranonkala media sosialy. Misy horonan-tsary an-tapitrisany maro nakarina tao amin'ity tranonkala ity.
Ka tsy fitsangatsanganana ao amin'ny valan-javaboary izany raha ny fahazoana ny horonan-tsarinao ho lasa viral amin'ity tranonkala ity. Mba hanaovana izany dia misy zavatra vitsivitsy izay afaka manandrana.
Raha vantany vao takiana ny fepetra rehetra - izay hozaraiko aminao amin'ny fizarana manaraka - dia mety hiparitaka amina minitra na ora vitsy ny horonan-tsary.
Torohevitra hahatonga ny horonan-tsarinao ho lasa virus amin'ny TikTok:
Betsaka ny zavatra azonao atao mba hahitanao ny horonan-tsarinao lasa viraliny ao amin'ny TikTok, amin'izany, mampitombo ny lazanao amin'ity fampiharana media sosialy goavambe ity.
Afaka mamaky ianao eto Mayengg03 On TikTok
Ny sasany amin'ireo torohevitra izay mety hanampy anao amin'io lafiny io dia toy izao manaraka izao:
Voalohany, ny antony iray ahafahana manasongadina ny horonan-tsarinao an-tampony dia mifandray amin'ny fotoana andefasanao azy ireo amin'ny Internet.
Araka ny tatitra, eo anelanelan'ny 7 AM-11 AM na 6 PM ka hatramin'ny 10 PM no fotoana an-tampon'ny fifamoivoizana amin'ny fampiharana.
Ny fampakaranao ny horonan-tsarinao amin'ireo ora ireo dia mety hahatanteraka izany aminao.
Faharoa, ny fahalalana ny mpihaino anao dia zavatra iray ahafahanao mandefa zavatra mety amin'ny tsatokanao TikTok. Ohatra, ny fahalalana hoe iza ireo olona manaraka anao ary inona ny zom-pireneny, dia afaka mandray dingana akaiky kokoa hahafantarana izay takiana aminao.
Ireo lafin-javatra roa ireo - ankoatry ny sasany hafa - dia afaka manapa-kevitra ny amin'ny anjaran'ilay horonantsary kasainao hapetraka ao amin'ny TikTok.
Mila paikady kely avy aminao ny fampandehanana ny horonan-tsarinao ao anatin'ny ora maromaro ao amin'ny TikTok.
Sokajy Tiktok Tags Soso-kevitra hanodinana ny horonan-tsarinao amin'ny TikTok
Mifandraisa anjara amin'ny 25,141 hafa